लोक स्टारका स्टार : सहदेव | NewsKarobar
गृहपृष्ठ लोक स्टारका स्टार : सहदेव
एसएलसी दिएर गाउँमै दूध डेरी चलाइरहँदा काभ्रे नमोबुद्धका सहदेव कोइरालाका ओठमाथि जुँगाका रेखी भर्खर बस्दै थिए । गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित उनी स्वरोजगार बन्ने ध्याउन्नमा थिए । गाउँमा प्लस टु भन्दा माथिको अध्ययनका लागि गाउँमा अवसर थिएन । सानै उमेरदेखि परिपक्व स्वाभावका देखिने उनलाई घर-परिवारदेखि छिमेकीसम्मले पत्याउँथे ।
गाउँमा वैदेशिक रोजगारीको लहड चल्यो । विदेश गएर फर्किने युवाको चुरीफुरीबाट उनको परिवार पनि बच्न सकेन । सुकिला लुगा लगाएका युवा साथीले विदेशका फराकिला सडक र बुर्ज खलिफाजस्ता अग्ला-अग्ला भवन देखेका कथा सुनाउँदा आफू त ठिकै मान्थे तर परिवारको दबाब बढ्दै गयो । आमालाई भने छोरो विदेश पठाउन मन थिएन । त्यसैले काठमाडौं रोज्नुभयो । ‘काठमाडौं जा बाबु, त्यहाँ धेरै सम्भावना छ, पढ्न पनि पाइन्छ,’ आमाको भनाइ सम्झँदै उनले भने, ‘ठूलो ठाउँमा तैंले धेरै गर्न सक्छस् ।’
आमालाई भर नलागोस् पनि किन ? छोरोको पढाइ राम्रो थियो । साहित्यतर्फ पनि रुचि राख्थ्यो । गीतसंगीत भनेपछि मरिहत्ते गर्थ्यो । अवसर धेरै हुने ठाउँमै त सम्भावना पनि धेरै हुन्छ भन्ने बुझेरै आमाले उनलाई काठमाडौं जान प्रेरित गर्नुभयो ।
नभन्दै आमाका आशीर्वचन शिरोधार्य गरेर सहदेव २०६२ सालमा काठमाडौं हान्निए । खासमा पढ्ने सोच बनाएर काठमाडौं आएका उनको भेट सांगीतिक माहोलसँग भयो । जे काम पनि चाँडै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने उनले काठमाडौं आएको दुई वर्षभित्रै संगीतमा फड्को मारे । उनको पहिलो लोकगीत रेकर्ड भयो-
‘अमृत भनी विषै ख्वाए नि !
सपनीमा भेट हुँदा बोल न विपनीमा जति रुवाए नि… !
आफ्नो शब्द-संगीतयुक्त पहिलो गीत रेकर्ड भएपछि उनमा खुसीको सीमा रहेन । त्यसयता उनले १४६ वटा गीत रेकर्ड गराइसकेका छन् । ‘सबै गीत युट्युबमा हेर्न सकिन्छ,’ उत्साहित हुँदै उनले भने, ‘सबै मेरै शब्द र संगीतमा छन् ।’
जीवनले सांगीतिक गति पक्डिसकेको थियो । सफलताको शिखरतर्फ पाइला राख्दै जाँदा फरक ढंगले केही गर्ने सोच बढ्दै गयो । उनमा संगीतप्रति गहिरो छाप बसिसकेको थियो । यही क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने दृढ संकल्प बनाइसकेका थिए । नभन्दै, नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७५ को सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । एकपछि अर्को काममा सफल हुँदै गएका सहदेव अहिले नेपालकै पहिलो लोकगीतसम्बन्धी रियालिटी सो ‘लोक स्टार’ लिएर आएका छन् । लोक स्टारले नेपालको लोक गीत/संगीतको क्षेत्रमा सहदेव स्वयंलाई एक ‘स्टार’को रुपमा उभ्याइदिने निश्चित छ ।
‘जीवनमा साना-साना कुरामात्र सोच्ने हो भने ठूलो कामसम्म पुग्नै सकिँदैन र ठूलो कामको नतिजा पनि ठूलै आउँछ’ भन्ने सोच राख्ने सहदेव नेपाली सांगीतिक आकाश धेरै फराकिलो भइसकेको बताउँछन् । ‘तर नेपाली संगीत क्षेत्र लागेर सिक्ने थलो बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरेर यो क्षेत्रमा लाग्ने होइन कि यो क्षेत्रमा लागेर सिक्दै जाने स्थिति छ ।’ विद्यालय तहदेखि नै संगीतको ज्ञान दिन सके संगीतकर्मीको मात्र नभएर दर्शकको स्तर पनि बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
सहदेव कोइराला संगीतमा मात्र सीमित छैनन् । साहित्यमा उनको बेग्लै लगाव छ । कक्षा ५ देखि नै कविता प्रतियोगितामा सधैं प्रथम हुन्थे । विद्यालय तहमा मात्रै होइन, जिल्ला स्तरीय बाल कविता प्रतियोगितामा पनि उनी प्रथम भएका छन् । ‘पहिलो यात्रा’ कविता संग्रह निकाल्ने तयारीमा छन् । तीनवटा त उपन्यास नै लेखिसकेका छन्- दुःखमाथिको हाँसो, अधुरो प्रेम र सडककी चेली । ‘अब चाँडै प्रकाशन गर्ने योजनामा छु,’ उनले भने ।
दाम्पत्य जीवनकाठमाडौं आएको दुई वर्ष नबित्दै २०६४ सालमा उनले जोरपाटीकी रीता सुवेदीसँग बिहे गरे । पारिवारिक गति र सांगीतिक गति समान ढंगले बढिरहेको छ । रीताको साथले उनको व्यक्तिगत जीवन रथ खुला आकाशमा जसरी सयर गरिरहेको छ, सांगीतिक क्षेत्र पनि बेरोकटोक उस्तै गतिमा हुइँकिरहेको छ । ‘मेरो प्रोफेसनल लाइफ र पर्सनल लाइफमा रीताको स्पष्ट बुझाइले नै यहाँसम्म आइपुग्न सहज भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी यात्रा पनि यही गतिमा अघि बढ्नेछ ।’
श्रमती रीतासँग सहदेव ।
लोकगीत/संगीत नेपालीको मौलिकता हो । गुँड छाडेर खुला आकाशमा चारैतिर दौडने चराचुरुंगी पनि साँझ परेपछि गुँडमै फर्किन्छ । अहिले नेपाली संगीत क्षेत्रमा लोकगीत पनि आफ्नो स्थानमा फर्किसकेको छ । ‘विगतमा लोकगीतको छुट्टै महत्व थियो, लोकगीतलाई घर, परिवार र समाजलाई नै एकसूत्रमा जोडेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बीचमा केही विचलन आयो, अहिले फेरि त्यही अवस्थामा फर्किसकेको छ ।’
एकताका लोक संगीतमा शम्भु राई, उषाकला राईलगायतको छाप पूर्व क्षेत्रमा धेरै थियो । तर, राजधानी पश्चिमको क्षेत्रको लोकगीत मेलापातभन्दा खासै माथि उठ्न सकेको थिएन । सुस्ताउँदै गएको लोक सांगीतिक क्षेत्रमा २०५४/५५ सालताकादेखि भगवान भण्डारी, नवराज घोरासैनीलगायतले दोहोरी गीतको माध्यमबाट त्राण भर्ने प्रयास गरे । विस्तारै लोकगीतको बाढी आयो । कलाकार थुप्रै जन्मिए, गीत धेरै गाइए । लोक संगीत क्षेत्र व्यावसायिक बन्दै गयो ।
लोक स्टारका निर्णायक मण्डलका सदस्य ।
अहिले लोकगीतले धेरै फड्को मारेको छ । गोक गायक प्रकाश सपूतको ‘गलबन्दी…’ युट्युबमा छोटो समयमै सर्वाधिक हेरिने (एक महिनामै डेढ करोड) लोकगीतको सूचीमा छ । विष्णु माझीको ‘सालको पात…’ साढे ४ करोडले हेरिसकेका छन् । यी ताजा उदाहरणमात्र हुन् । अहिले मुखमा झुन्डिने खालका सयौं लोकगीत गाइएका छन् ।
लोक सांगीतिक क्षेत्रले व्यावसायिक उचाइ लिँदै गर्दा चाहना मिडिया प्रालिको ब्यानरमा लोक स्टारको उदय भएको छ, जसका अध्यक्ष हुन् सहदेव । ५० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार राशिको यो रियालिटी सो ले नेपाली लोक गीत/संगीतको क्षेत्रमा छुट्टै प्रभाव जनाउने सहदेवको विश्वास छ । देशका सबै ७७ जिल्लाबाट छानिएर प्रदेशसम्म आइपुगेका करिब २२ हजार प्रतिस्पर्धीमध्ये लोक स्टारको मञ्चमा ३६३ जना उक्लिसकेका छन् । ओझेलमा परेका संस्कृतिलाई लोक स्टारले माथि उठ्न सहयोग पु-याउनेछ । लोक स्टारको मञ्चमा गाइने १८-२० भाषाका गीतले यसको गरिमा अझ बढाउनेछ, यसको सार्थकता सिद्ध गर्नेछ । मञ्चबाट एकजना स्टार छनोट हुनेछन् तर सयौं लोक स्टार जन्मने आधार तयार हुनेछ । ‘लोक स्टार लोक गीत/संगीत क्षेत्रमा लाग्ने सबैको बनोस्, यही अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
पछिल्लाे - कर्मचारीको अभावमा दुर्गम भोटखोलाका सेवाग्राहीलाई सास्ती
अघिल्लाे - सूर्योदयमा चिया परीक्षण केन्द्र निर्माण हुने